« Couvre-feu »: tsy tafiditra an-dRenivohitra ny sarety mpitondra anana | NewsMada
« Couvre-feu »: tsy tafiditra an-dRenivohitra ny sarety mpitondra anana
Miantraika any amin’ny famatsiana sakafo eto Antananarivo Renivohitra ny fandrarana ny fivezivezena amin’ny alina (couvre-feu), manombokaamin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 5 ora maraina. Anisan’izany ny anana izay saika tantsaha manodidina an’Antananarivo (i Sabotsy Namehana, i Belanitra, Ambohimanambola, i Mandroseza, Antsahadinta, Ambohitrimanjaka,…) avokoa ny mamboly azy. Taterina amin’ny sarety atosi-tanana izy ireny amin’ny alina na ny maraimbe manomboka amin’ny 1 ora maraina. Tsy afaka manao intsony izany ireo mpamboly satria voarara ny fivezivezena amin’ny alina hatramin’ny 5 ora maraina. Voatery aorian’ny amin’ny 5 ora maraina vao manomboka mitondra ny vokatra izy ireo, ary lasa tara ny fahatongavany eny an-tsena, amin’ny 7 ora na amin’ny 8 ora maraina.
Miantraika amin’ny fidiram-bola
Miantraika any amin’ny fidiram-bolan’ny mpamboly, ny mpivarotra antsinjarany koa anefa izany satria voafetra hatramin’ny 12 ora antoandro ihany ny azo ivarotana. Efa vitsy rahateo ny mpividy satria mihiboka any an-trano avokoa.
Afaka miditra soa aman-tsara kosa ny legioma hafa, toy ny tsaramaso, ny voanjobory, ny ovy, ny karaoty, ny voatavo, sns. Avy any Antsirabe, avy any Ambatolampy, avy any Ampefy …, ny ankamaroany ary mitoby eny Anosibe. Entina sarety entin-tanana indray ireny avy eo mamatsy ny tsena lehibe eto an-dRenivohitra toy ny eny Andravoahangy, ny eny Analakely.
En encadré (eo ambanin’ny anana26mars)
Misy fandaminana manokana hamatsiana ny mpivarotra eto an-dRenivohitra. Anisan’izany ireo mpamongady sy ny mpaninjara. Arindra ny famatsiana ka ferana ny fatra sy ny lanja azo tsinjaraina amin’ny mpamongady sy ny mpaninjara. Eo ny vary, ny lafarinina, ny menaka, sns. Ampy tsara ny tahirin-tsakafo fototra eto amintsika.
Nanamafy koa ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, Randrianarivelo Lucien, omaly, fa afaka mandeha malalaka ny fiarabe mpitondra entana, tsy mila fahazoan-dalana manokana. Ferana kosa anefa ny isan’ny olona ao anatiny satria ny olombelona no tena mila tandrovina sy arovana tsy iparitahan’ny Coronavirus.